‘मीटू’ का कारण महिला कर्मचारी नियुक्तिमा समस्या
एजेन्सी । विश्वव्यापी रुपमा सञ्चालित ‘मीटू’ अभियान महिलाहरुको पक्षमा चालिएको हालसम्मकै ठूलो कदम भए पनि यसका केही अनपेक्षित परिणामले दिन प्रतिदिन खराब रुप लिँदै गइरहेका छन् । केही समय अगाडि मात्र विश्व...
कांग्रेस जागरण अभियान आजबाट, शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान आज(मंगलबार)देखि शुरु हुँदैछ। प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत जागरण अभियान देशभरका ३३० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आज एकैपटक शुरु हुने क...
यस वर्षको दशैंको टीकाको साइत सार्वजनिक
काठमाडौं । बजारमा दशैंको चहलपहल पनि शुरु भइसकेको छ । यता, यस वर्षको दशैंको टीका र घटस्थापनाको साइत निस्किएको छ। पञ्‍चाङ्ग निर्णायक समितिले सार्वजनिक गरेको साइतअनुसार दशैंको टीकाको साइत बिहान १० बजेर...
शान्ति प्रक्रिया रद्ध, ट्रम्प प्रशासनले आफूलाई नोक्सान पुर्यायो – तालिबान समूह
एजेन्सी । अफगानिस्तानमा क्रियाशील तालिबान समूहले शान्ति प्रक्रिया रद्ध ट्रम्प प्रशासनले आफूलाई नोक्सान पुर्याएको टिप्पणी गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गएको शनिबार ट्विट गर्दै तालिवान ...
‘डोरियन आँधी’ आणविक बम बराबर
एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्बन्धी अमेरिकी नियोग (युएसएआइडी)का प्रमुखले एटलान्टिक ओसियन अन्तर्गतको बहमासमा हालै आएको आँधी डोरियनको क्षति आणविक बमको क्षति बराबरको भएको बताएका छन् । सो संस्थाका प...
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको व्यस्तता : द्विपक्षीय वार्तादेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँगको भेट पनि आजै
काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा राज्यपरिषद् सदस्य वाङ यी हिजो (आइतबार) साँझ काठमाडौं आइ पुगेका छन् । पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादबाट विशेष विमानमार्फत काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्...
काठमाडौं । श्रीलंकामा जारी यू–१९ एसिया कपको प्रतियोगिताबाट नेपाल बाहिरिएको छ । आइतबार भएको खेलमा बंगलादेशसँग ६ विकेटले हारेसँगै नेपाल यू–१९ एसिया कपबाट बाहिरिएको हो । आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल श्रीलंका...
एजेन्सी । पाकिस्तान क्रिकेटका भेट्रान स्पिनर अब्दुल कादिरको ६३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । आफ्नाे समयका विश्व प्रशिद्ध लेग स्पिनर कादिरको ह्दयघातका कारण निधन भएको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका ...
चीनको तर्फबाट हालसम्म भएको उच्चस्तरीय नेपाल भ्रणमहरू:
काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले परारष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको निम्तोमा उनी नेपाल आउन लागेको पुष्टि गरेका छन्। मन्त्रा...
नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवामा समस्या देखिन सक्ने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले शनिबार रातिदेखि जीएसएम मोबाइल सेवामा समस्या देखिन सक्ने बताएको छ । कम्पनीले आफ्नो सेवालाई फोरजीमा अपग्रेड गर्न लागेकाले त्यसका कारण सेवामा समस्या देखिन सक्ने टेलिकमले जनाएको ...
माछापोखरीबाट २ वटा पेस्तोलसहित ७ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले गुण्डागर्दीमा संलग्न भन्दै ७ जनालाई २ वटा पेस्तोलसहित पक्राउ गरेको छ । हिजो(शनिबार) अपरान्ह ४ः३० बजे माछापोखरीबाट २ वटा पेस्तोल र ४ राउण्ड गोलीसहित उनीहरुलाई काठमाडौ प्रहरीले पक...
काठमाडौं । भारतको चन्द्रयान-२ चन्द्रमामा अवतरण गर्नुभन्दा केही समय अगाडि नै सम्पर्क विहिन बनेको छ । चन्द्रयान अवतरणको दृष्यावलोकन गर्न भारतीय अन्तरीक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो) को मुख्यालय पुगेका प्रधान...
उपचारपछि सिंगापुरबाट प्रधानमन्त्री आज फकिँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिङ्गापुरबाट उपचार गरी आज फर्किँदै छन्। प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले सिङ्गापुरबाट थाइल्याण्ड हुँदै अपराह्न थाई एयरवेजबाट प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्कने ...
बिहिबार, भदौ १९, २०७६
छिन्चु -१, गेरूवानी सुर्खेतमा वि.सं २०३१ फागुन ५ आमा भविसरा चन्द तथा बुबा केशर बहादुर चन्दको छोरा हुन- विक्रम शिशिर (Bikram Sishir)। उनको वास्तविक नाम राज विक्रम चन्द हो । शिशिर हाल कोहलपुर १२ चप्परग...
एजेन्सी । भारत सरकारले नयाँ आतंकवाद निरोधक कानुनअनुसार चार जनालाई आतंकवादी घोषित गरेको छ । लश्कर–ए–तैयबाका संस्थापक हाफिज मुहम्मद सईद, मुम्बई आतंकवादी हमलाका आरोपी जकी–उर–रहमान–लखवी, जैश–ए–मोहम्मदका ...
चार थान पेस्तोलसहित धनगढीमा तीन जना पक्राउ
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा चार थान पेस्तोलसहित तीन जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले बुधबार साँझ धनगढी उप–महानगर...
विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिँदै हङ्‌कङ सरकार
एजेन्सी । हङ्‌कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले महिनौँदेखिको विरोध प्रदर्शनहरूको कारक बनेको सुपुर्दगी सम्बन्धी एक विधेयकलाई फिर्ता लिने बताएकी छन् । गत एप्रिल महिनामा ल्याइएको उक्त विधेयकमा संदिग्ध...
एजेन्सी । भारतको उत्तरी राज्य पञ्जावमा रहेको एक कारखानामा भएको विस्फोटनमा परी कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ । विस्फोटनका बेला कारखानामै रहेकाले दुर्घटनामा परेका अरू ५० जना त्रसित भएको अधिकारीहरुले...
जीप दुर्घटना : तीन जनाकाे मृत्यु, २१ घाइते
स्याङ्जा । स्याङ्जामा जीप दुर्घटनामा परी एक बालकसहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ । बुधबार दिउँसो गल्याङ– ३ मा भएको उक्त जीप दुर्घटनामा २१ जना घाइते भएका छन् । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाबाट स्याङ्जाको गल्य...
मुलुकका युवा जाग्ने कहिले ?
शान्ति प्रक्रिया शुरु भएदेखि वर्तमान अवस्थासम्म नेताहरूको आचरण र समकालीन राजनीतिक, चारित्रिक विकृति देख्दा समाजवादका नारा लिएर सत्ता सम्हाल्न पुगेका राजनीतिक दलहरूप्रति जताततै असन्तुष्टिका स्वरहरू बढ्...